जनताको खबरसहित खबरदारीमा खबरमञ्च - खबरमञ्च खबरमञ्च
You are here: Home > विचार / ब्लग > Current Article
जनताको खबरसहित खबरदारीमा खबरमञ्च
जेठ १५, एकराज गिरी, at 11:51 AM
By खबर मञ्च / May 29, 2017 / Comments Off on जनताको खबरसहित खबरदारीमा खबरमञ्च
अत्याधुनिक प्रविधिको द्रुत विकाससँगै सञ्चार बिनाको जीवनशैली आजको युगमा कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । मानिसका लागि आमसंचार गाँस, बाँस र कपास जस्तै अनिवार्य बनिसकेको छ ।
आमसंचारप्रतिको आकर्षण उत्तिकै बढ्दो छ । बोली, भाषा, लिपी हुँदै एकोहोरो संचारबाट शुरु भएको संचारको विकास कटुवाल घोकाउने, सनै बजाएर मानिस जम्मा गरी सन्देश प्रवाह गर्ने युगबाट कयौं गुणा अघि फड्को मारेको छ ।
छापामा संचारमाध्यमको रुपमा पत्रपत्रिका, विद्युतीय संचारमाध्यमको रुपमा रेडियो, टेलिभिजन हुँदै आधुनिक विश्वको अत्याधुनिक संचारमाध्यम बनेको छ अहिले विद्युतीय पत्रिका ‘अनलाइन ।’
विद्युतीय पत्रिका ‘अनलाइन’ मार्फत एक क्लिकमा सेकेन्डभरमा विश्वमा सूचना प्रवाह सम्भव भएको छ । आमसंचारको अत्याधुनिक र सशक्त माध्यम बनेको छ आज अनलाइन ।
आज झापामा पनि धेरै अनलाइन उदाएका छन्, त्यो मध्ये बेग्लै पहिचानसहित स्थापित अनलाइन हो खबर मञ्च ।
नेपालमा पत्रकारिता प्रवेशको ११८ वर्ष वितेको छ । यो इतिहासको वीचमा झापाको पत्रकारिताले ६३ वर्षे उमेर पार गरेको छ । २०१० साल मंसीर १२ बाट श्यामकृष्ण उपाध्यायको सम्पादकत्वमा प्रकाशित ‘केटो’ झापाली पत्रकारिता इतिहासको पहिलो अर्थात जेठो पत्रिका हो । झापाकै मात्र कुरा गर्ने हो भने नेपाल पत्रकार महासंघका सदस्यता प्राप्त २६८ पत्रकार छन् ।
तीसहित ३०० को हाराहारीमा पत्रकार छन् । सञ्चारमाध्यमको कुरा गर्नुपर्दा झापामा ६७ वटा छन् । पत्रिकाहरुमा दैनिक १०, साप्ताहिक १९, मासिक ४ वटा छन् । टेलिभिजन २, रेडियो एफएम १६ छन्, अनलाइन १६ वटा छन् ।
यतिधेरै सञ्चारमाध्यमको भीडमा खबर मञ्च अनलाइन फरक विशेषता र प्रस्तुतिले अग्लिएको छ । प्रथमतः दोस्रो बर्ष प्रवेशको पावन क्षणमा खबर मञ्च अनलाइन पत्रिकालाई हार्दिक शुभकामना ।
सम्पादक सिर्जना घिमिरेको नामझैं सिर्जनशील सोच र रचनात्मक कार्यशैलीको उपज प्रकाशनको बर्षदिन गुजार्दै गर्दा खबर मञ्च अनलाइन पत्रिका पाठकको रोजाई, खोजाईमा पर्न सफल भएको मैले अनुभूति गरेको छु । पेज आकर्षक छ ।
फोटो पत्रकार वुद्ध तामाङ्ग लगाायतका सक्रिय, जुझारु कलमकर्मीको मिहिनेतले ‘एक भिन्नै पहिचानको अनलाइन पत्रिका’ बनेको छ खबर मञ्च । यो सवैको साझा देखिएको छ । यसको श्रेय खबर मञ्चलाई अभिभावकत्व प्रदान गरिरहनु हुने अनुभवी पत्रकार उमाकान्त खनाललाई नदिइरहन सकिन्न ।
सिर्जना अध्ययनको शिलशिलाामा काठमाडौं जाने सुनेपछि झापामा स्थापना भएर छोटो समयमा पाठकको रोजाइमा परेको यो अनलाइन कतै बन्द त हुने होइन भन्ने चिन्ता मलाइ थियो तर साहस र सही व्यवस्थापनमा पनि अब्बल सम्पादक सिर्जना र अभिभावकत्व प्रदान गर्नुहुने उमाकान्त सरको प्रयासमा यो अझ चम्किएको छ ।
सिर्जना जीले काठमाडौंबाटै सबै खुराक हेर्दै हुनुहुन्छ भने जिल्लामा रहेका सहकर्मीको अनवरत योगदान प्रसंशनीय छ । क्षण क्षणको खबर अझ जनताका खबर लिएर आउने खबर मञ्च सरकार र सरोकारवालालाई जिम्वेवार बनाउन खबरदारी पनि गर्रिहेको छ ।
यो अर्थमा पत्रकारिताको धर्म र कर्ममा उत्कृष्ट दरिएको छ खबर मञ्च ।
सञ्चारमाध्यम खुल्ने र बन्द हुने क्रम निरन्तर नै चलिरहेको छ । खुलेको सञ्चारमाध्यम बन्द हुनुहुँदैन । प्रकाशन संस्थाको दीगो विकास अहिलेको आवश्यकता हो । सञ्चारमाध्यम समाज विकासको आधार हो । सञ्चारकर्मी पथप्रदर्शक । खबर मञ्च र आवद्ध सञ्चारकर्मी सबै पनि यो जिम्मेवारीभित्रै छन् ।
अत्याधुनिक सञ्चारमाध्यम भए पनि अनलाइनको यात्रा चुनौतिपूर्ण छ । जिल्ला तहमा अनलाइन सशक्त सत्तचारमाध्यम हो भन्ने अनुभूति गर्न गराउन सकिएको छैन । अनलाइनमा विज्ञापन गर्दा क्षणभरमा विश्य बजारमा प्रचार पुग्छ तर त्यो चेतना अझै आउन सकेको छैन । हरेक मानिसले मोवाइलबाटै विश्वका खबर जानिरहेका छन् त्यो अनलाइनले दिइरहेको छ ।
तर आफ्नो व्यापार प्रवद्र्धन गर्न अनलाइनको सहायता लिनुपर्छ, अनलाइन पत्रिकामा विज्ञापन दिनुपर्छ भन्ने आभाष नहुनु अनलाइनको मुख्य चुनौति हो । विज्ञापन नै हो अनलाइनको चल्ने आधार । विज्ञापनदाताहरुमा अनुरोध पनि गर्छु कि जिल्लाका स्थापित अनलाइनलाई विज्ञापन दिएर व्यापार प्रवद्र्धनका निम्ति सहकार्य गर्नुहोस् ।
अर्को कुरा फेसबुक पेज झैं खुल्ने च्याउसरी अवैधानिक अनलाइनले समस्या थपेको छ । कम से कम अनलाइन चलाउने हो भने त्यसको मापदण्ड पूरा गर्न पनि म आग्रह गर्छु सवैमा जसरी खबर मञ्चले यस मामलामा आफूलाई अब्बल साबित गरेको छ ।
नेपालमा अझ मोफसलमा पत्रकारिता धेरै चुनौति झेल्दै आएको छ । पत्रकारको पहुँच सूचनाको स्रोतमा छैन । सञ्चार क्षेत्रमा चरम राजनीतिकरण र आर्थिक संकट विद्यमान छ । दक्ष जनशक्तिको उत्तिकै अभाव ।
नयाँ पुस्तालाई सिकाउदै काम लगाउनुपर्ने, अलि जान्ने भएपछि कि अन्तै काम गर्न कि विदेशिने प्रबृत्ति छ । भौतिक पूर्वाधार पर्याप्त छैन । विधिको शासन उत्तिकै खड्किएको विषय हो । पेशागत असुरक्षा छ ।
कुनै विषयमा खोज, अनुसन्धान गरेको तथा लेखेकै आधारमा गाली, धम्की, आक्रमणको शिकार हुनुपरेको छ । सत्य तीतो हुन्छ । स्वीकार्न गाह्रो परिरहेकोछ यहा मानिसहरुलाई । आलोचना र विरोध सहने संस्कार छैन, आफू सुध्रन कोही चाहदैन । प्रतिशोधले मनमनमा घर गरेको छ ।
सवै आफूले सोचे झैं बनून् भन्ने भ्रमपूर्ण, कल्पनाशील चाहना राख्छन् । त्यो सम्भव छैन । व्यवसायिकता ग्रहण गर्न सकेको छैन अझै हाम्रा कामले । हामी शहरमै केन्द्रीत र रमाएका छौं । गाउँ बारे सञ्चारमाध्यम बेखबर छ । निरक्षरता र गरिबी पनि गाउँमा सञ्चार पहुँच कमीको कारण बनेको छ ।
सरकार पनि उत्तिकै जिम्मेवारी छ । स्पष्ट नीति, भएका व्यवस्थाको कार्यान्वयन नहुनु हामीले झेलिरहेका यथार्थ हुन् । यी चुनौतिकाबीच आफूलाई अब्बल सावित गरेर समाज र राष्ट्रप्रतिको गहन दायित्व निर्वाह गर्न चुक्नु हुन्न ।
चुनौति सामना गर्दै जानुपर्छ । विगतभन्दा बर्तमान सन्तोषनजनक छ । भविष्यलाई सुखद् बनाउनुपर्छ । यस अभियानमा खबर मञ्चकोे पनि योगदान छ, यात्रा अविराम रहोस् ।
अन्त्यमा अझ धेरै सेरोफेरो, विषय, विधा समेटिन सकून् । साहित्य, भाषा, धर्म, जाति समेटिउन् । पत्रकारिताको सिद्धान्त र मूल्य–मान्यता सवै सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीले सिरोपर गर्नुपर्ने हुन्छ ।
खबर मञ्च यसमै रहेर विकसित हुन सकोस् । शुद्धता, सन्तुलन, विश्वसनीयता, सिष्टता, नैतिकता, स्वच्छता जस्ता पत्रकारिताको सिद्धान्तभित्र छ– खबर मञ्च । आगामी दिनमा यी सिद्धान्तको पर्याय नै बन्न सकोस् ।
अझ आकर्षक डिजाइनका साथ सजिएर मन जित्न सफल होस् । खबर मञ्च अझ उत्कृष्ट र अझ धेरैको रोजाई र जीवनको मार्ग दर्शक बन्न सकोस्– शुभकामना ।
(लेखक गिरी नेपाल पत्रकार महासंघ झापाका उपाध्यक्ष तथा पूर्वाञ्चल दैनिकका सम्पादक हुन् । )
Last Modified: May 30, 2017 @ 1:35 pm
Filed Under: विचार / ब्लग
अझ अघि बढ्न प्रेरणा मिलेको छ (विशेष प्रकाशकीय)
ब्लग: केही फरक सोच्ने कि ?
नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक धुम्बाराहीमा सुरु
विज्ञ टोलीद्वारा सिक्टाको माटो निरीक्षण
नेपाली का‌ंग्रेसकाे महासमिति बैठक काठमाडाै‌ंमा शुरु (भिडियाेसहित)
भारतमा ३३ केजी सुनसहित नेपाली नागरिक पक्राउ
कांग्रेस महासमिति बैठकः बिहानको खाजा र खाना मात्रै पार्टीको
काठमाडौं । कांग्रेसको विधानअनुसार हरेक वर्ष हुनुपर्ने महासमिति बैठक ६ …
अमेरिकामा पनि सुरक्षित छैनन् नेपाली
न्युयोर्क । केही समयअघि भर्जिनियाको हेरन्डनस्थित फ्रेक्लिन फार्मको सुनोको ग्यास …
शृंखलाले भनिन्, ‘पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बन्छु’
काठमाडौं । दरबार मार्गस्थित पाँचतारे होटल अन्नपूर्णको खचाखच वातावरणबीच शृंखला …
घरधनी सांसदले लिइरहेका छन् घरभाडा
काठमाडौं । राजधानीमा घर हुने सांसदले ‘घर छैन’ भनेर संसद् …
स्मार्ट मोबाइल फोनका लागि बिर्तामोडमा रुप मोबाइल घर
Engineers’ role important for nation building: PM Oli
Province3formulates corruption control strategy
NA Chair Sees Need Of Campaign For Development
Sudur Paschim CM Expresses Sorrow Over Fatal Bus Accidents
Minister Thapa Initiates ‘Clean, Healthy And Safe Bhaktapur’ Campaign
मेघालयको कोइलाखानीमा बाढी पस्यो, १३ मजदुरको मृत्यु भएको आशंका
हुवावेका उच्च अधिकारी क्यानडामा पक्राउ, चीनको विरोध
सात दिनमा संकट समाधान गर्ने सिरिसेनाको आश्वासन
१६ वर्षीय किशोरको ७१ वर्षीया बृद्धासँग माया बसेपछि…
भनिन्छ, प्रेम अन्धो हुन्छ । माया गर्नेहरुका लागि जाति, धर्म, …Read More »
सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि शक्तिशाली आयोग बनाउँदैछौंः मन्त्री अर्याल
काठमाडौंको रातोपुलमा गाेली चल्याे, डकैतीमा मुछिएका लिम्बु घाइते
प्रयास हत्या प्रकरणः बुबाकै गाडीमा घाँटी थिचेर हत्या, शवलाई ठेगान लगाएपछि खोजीमा ‘सहयोग’ !
© 2018 खबरमञ्च. सर्वाधिकार सुरक्षित Site by Genese
‘भ्रष्टाचार रोक्न असल नियत र नियमको खाँचो’